Occasion - Engels - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: occasion (Engels - Burmees)
i think that this holiday is another occasion when people can get together and have fun.
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီအားလပ်ရက်က လူတွေစုစည်းပြီး ပျော်စရာရှာတဲ့ နောက်ထပ်အချိန်အခါတစ်ခုလို့ပဲ ထင်တယ်။
မိမိညီအစ်ကိုကိုချစ်သောသူသည် အလင်း၌ တည်နေ၏။ ထိမိ၍ လဲစရာအကြောင်းသည်ထိုသူ၌မရှိ။
ထိုသို့ဆိုသော်၊ ပညတ်အားဖြင့် ငါဆိုသည် မဟုတ်။ အခြားသောသူတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကို အစွဲပြု၍၊ သင်တို့၏မေတ္တာသည် မှန်သည်မမှန်သည်ကို စုံစမ်းသောအားဖြင့်ဆိုသတည်း။
ဤနိမိတ်လက္ခဏာတို့သည် သင်၌ ဖြစ်သောအခါ၊ အဆင်သင့်သည်အတိုင်း ပြုလော့။ ဘုရားသခင် သည် သင်နှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏။
အပြစ်တရားသည် ပညတ်တရားအားဖြင့် အခွင့်ရ၍၊ ငါ၌ အမျိုးမျိုးသော လောဘတို့ကို ဖြစ်စေ၏။ ပညတ်တရားမရှိလျှင်၊ အပြစ်တရားသေ၏။
ဘုရားသခင်၏ ဘာသာမှုမှတပါးအခြားသော အမှုတွင် ဒံယေလ၌ အပြစ်တင်ခွင့်ကိုငါတို့ မတွေ့နိုင် ကြဟု တိုင်ပင်ပြောဆိုပြီးမှ၊
ထိုကြောင့်၊ အသက်အရွယ်နုပျိုသော မုတ်ဆိုးမတို့သည် အိမ်သင့်ခြင်း၊ သားဘွားခြင်း၊ အိမ်မှုကို ကြည့်ရှုပြုစုခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့စရာအခွင့်ကို ရန်သူအား မပေးဘဲနေခြင်း အမှုများကို ပြုစေခြင်းငှါ ငါအလိုရှိ၏။
ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ကို ရသောသူဖြစ်ကြ၏။ သို့သော်လည်း ဇာတိပကတိအား အခွင့်ကိုပေး၍၊ ထိုလွှတ်ခြင်းကို မသုံးကြနှင့်။ အချင်းချင်းချစ်၍ အမှုချင်းကို ဆောင်ရွက်ကြလော့။
ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသောအားဖြင့်၊ ရှံဆုန်သည် ဖိလိတ္တိလူတို့၌ အမှုရှာကြောင်းကို မိဘတို့သည် မရိပ်မိကြ။ ထိုကာလ၌ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ဣသရေလအမျိုးကို အုပ်စိုးသတည်း။
ထိုအခါ ဝန်ကြီးနှင့်မြို့ဝန်တို့သည် ဒံယေလ၌ အပြစ်တင်ခွင့်ကို ရှာ၍၊ နိုင်ငံတော်အမှုအရေးများကို စစ်ကြောကြ၏။ ဒံယေလသည် သစ္စာနှင့် ပြည့်စုံ၍ အပြစ်တစုံတခုမျှမရှိသောကြောင့်၊ အပြစ်တင်ခွင့်ကို ရှာ၍မတွေ့ကြသည်ရှိသော်၊
first of all, those few tajikistanis who "celebrate" halloween don't actually view it asaholiday. it is just another occasion to diversify their lives, organize something fun and interesting.
အရင်ဦးဆုံးသိရမှာက ဒီဟယ်လိုဝင်းကို "ဆင်နွှဲ"ခဲ့ကြတဲ့ တာဂျစ်ကစ္စတန်လူနည်းစုက တကယ်တမ်းတော့ အဲဒါကို အားလပ်ရက်အနေနဲ့ မြင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါက သူတို့ဘဝကို ပြောင်းလဲပျော်ရွှင်ကြည့်ဖို့ ပျော်စရာကောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ တစ်ခုခုကို စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ကြတာ။
ရောဂါကူးစက်မှု ကာကွယ်ရန်အတွက် မှန်ကန်သော လက်ဆေးသည် နည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးသင့်သည့် အခြားသော အချိန်များတွင် ပြတ်ရှမှု သို့မဟုတ် အနာကို မကုသမီနှင့် ကုသပြီးနောက်၊ နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ သို့မဟုတ် နှာ ညှစ်ခြင်း ပြီးသည့်အခါ၊ တိရစ္ဆာန် အညစ်အကြေးများ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် တိရိစ္ဆာန်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်း ပြီးနောက်၊ နှင့် အမှိုက်သရိုက်များကို ကိုင်တွယ်ပြီးနောက်တို့ ပါဝင်သည်။
nedløbsbrønd (Deens>Engels)traduccion espanol (Spaans>Deens)permission to go out (Engels>Hindi)fermerait (Frans>Engels)yes im doing some work (Engels>Maleis)big (Deens>Nederlands)chal by (Hindi>Telugu)我复习完再找你 (Chinees (Vereenvoudigd)>Engels)escándalos (Spaans>Russisch)rub it (Spaans>Engels)bua (Hindi>Tamil)nude vista (Duits>Chinees (Vereenvoudigd))alto voice (Tagalog>Engels)ram ne shyam ko kyu peet diya hai (Hindi>Engels)sir interview ke liye kab aana hai (Hindi>Engels)defeat red bugs (Engels>Spaans)فیلم سکسی کودکان کم سن وسال (Turks>Engels)spiritual values (Engels>Tagalog)io faccio (Engels>Italiaans)fÃ¡quico (Spaans>Engels)Ø¨Ø§ï¿½ï¿½ØºØ© (Arabisch>Engels)and you my beautiful friend (Deens>Spaans)kakak sudah makan belum (Maleis>Engels)bercemar duli (Maleis>Engels)llena de dolor (Spaans>Frans)